Mucaaridka kasoo Horjeeda Axmed Madoobe oo ku dhowaaqay Xildhibaano Cusub iyo Beelaha ay kasoo jeedaan | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Mucaaridka kasoo Horjeeda Axmed Madoobe oo ku dhowaaqay Xildhibaano Cusub iyo Beelaha ay kasoo jeedaan
Aug 13, 2019 - 22 Aragtiyood
Kismaayo ( Kalshaale) Guddiga doorashooyinka ay magacaabeen Golaha la baxay Badbaadada Jubbaland ee ka soo horjeeda Maamulka Axmed Madoobe ayaa saakay soo saaray Liiskooda Xildhibaanada Jubbaland, kaasoo jawaab u ah Liiskii uu xalay soo saaray Guddiga Madaxa bannaan ee Xuduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland.
aabo axmed marsadaxad soonoqo ,car yaa sharad dhiganaayo in axmed uuna soonoqoneyn
Gaaljecel ayaa hadda kahor soo weeraray Jowhar, caradii iyo dukaamaddii ayey ku dheeleen
Waxaa arkey Odey Jareerweyne ah (Dhiblaawe Mudullood) wuxuu dhahey ABGAAL WAAS IMAAHAA – waase soo daahaa ( Yacni markuu Abgaal soo buneysto ayuu soo qalab qaadana)
– Hadda WALAALAHA GALGADUUD WAA IMAANDOONAN, Waase soo daahayaa, Xamar iyo Ahlu-suna ayay ku mashquuleen.
* Taangi Kuukuuyo waa tagaa, Taariikh xunse Tirmi meeh
Car yaa Sharad ila dhigto inuusan Axmed sii joogeyn, HADEY KEENYANKU BAXAAN.
Anaa sharad kuladhigan
In uu soo noqon mar 3 am 4
Anaa huba kenya waxba haku
Meraysan kenya ammoson ayay
Ushaqaysaa uganda kula joogta
Aya isku mid yihiin uganda
Adiga hooyadaa miyaa dhashay
Axmed madoobe. Waa roboow oo kale. Hadaan tolnimo lagu dhaafin waa in uu caanaha ku cabaa godka jilicoow.
Farmaajo ayaa jilisan moyee mar horaa arintaas xal laga gaari lahaa.
Kismaayo waa riman tahay.
Shire cigaal says:
Waaba yaabay meesha majeerteen iyo dhulbahante leelkase jidwaq habaskuul weyteen degmadee ku Heleen..waa in hiraaab lasiiya 2 xildhibaan si maamumlka loogu qurxiyaa inclusive u noqdaa.. Marexaan haddi eey qabaan waa abgaal iyo Hg 2 xildhibaan lasiiya si loogula dhuuqo xamar..
Axmed Madoobe keen ama mid kale oo yimaada Kismaayo,midna guul ka keeni maayo.
Ksimayo sidaa ayay iska ahaan oo Kolba Kenya qof keensan ama Ethopiya keensan qof kale.
Saa Somalidii ayaa sidaa noqonatay.
Waxaa la kari waayay in sida Aadmaha loo dhaqmo oo qof la doorto .Lama karo,saa waxaa la rabaa in lays xado,lays khaayimo oo lays dilo.
Dad ka Somaliyeed way dhinteen dhaqan ahaan oo ma noola.
Wax ka xaaran ah ma jirto.
Waxay u baahan yihiin Cultural Revolution.
Tulo aan laysku haysan ma jirto.
Waa dad si dhib yar loo isticmaalo.
Walee Somaliya halis ayay daaqaysaa.
Hadii aanu dhicin kacaan xagga edaabta,dhaqanka suuban,Somalinimada,Islaamnimada,xaqdhawrka iyo dad nimada dhicin,hadii aanay Somalidu balidin sida ay u fikirto,halis ayay ku jirtaa.
Armaajo Amxaarkii uu ka baryay inay Axmed Madoobe meesha ka saaraan ma Sawaaxiligii baa arrimaha kala hadlay,una sheegay inaanu soo faro-gelin masaalixda Kenya ee jubbaland
Halkaana Guul-darro ayaa Villa-war-dhiiglay ka raacday.
A.Madoobe lagu dhici waa
Baydhabo meel kasta ha moodina ayaa lagu yidhi Villa-war-dhiiglay
taase waa shibarayo heesa.. hees macan heesa..
MOORIYAANTII MAKROOFANKA SIDAN JIDHAY AAN SOO XASUUSTAY….
Ku qabso, ku wadi meeysideeee…..
KHAYRE iyo FARMAAJO, halkaan waxeey moodeen GALMUDUG oo ugu shaqaynaysaa CAREABEEEY IYO GACALEEEEEEEEEEEEY..
XAAF BAA YAABAY… 5M uu ka qaatay ugana tegay dhibtii..
Sida wararku sheegayaan, KISMAAYO waxaa ku soo fool leh, TALIYAHA AMISON oo ETHIOPIAN ah, sidii uu qaban lahaa AXMED MADOOWBE…
AXMED MADOOBANA wuxuu diyaarsaday ilaa 5,000 KABLALAX AH. Dhamaan hubkii KENYA yeel KISMAAYO waxaa lagu wareejiyey CIIDAMADA AXMED MADOOWBE…
Bal aragno wixii ka dhaca… tallow 500 ASKARI oo diyaarad lagu soo daabulay, ma qaban kartaa 5,000 oo ciidan ah..
LET US WAIT AND SEE WHAT WILL HAPPEN IN THE NEXT FEW WEEKS UP TO 24 OF AUGUST 2019.
WALEE KISMAAYO DHIIG BADAN BEEY QABTAAA..
HARTI, LEELKASE, JIDWAAQ,…..
Dhigoodii baa yaal… waxeey ku heeleen kuraasta DHAXAL AABBEEEEE..
Hadii shalay deganaa HAWIYE KISMAAYO, maantay ma deggana..
Taase waa KABLALAX ugu badnaa MUQDISHU, maantay ma joogaan..
nin waliba taagtiis iyo tamartiis…
Markii laga soo baxo doorashadaa.. YOOLKU wuxuu saaaran yahay..
BUAALEEE, JAMAAMEE, JELIB, MUDUL BARAAWEE….
SHEEKHAASHAA ku habsatay JELIB, meel u diyaariyaa hadii aad tiheen HAWIYE..
Galmudug waxay odhan jireen”annaga ma Baydhabo ayuu na moodayaa”,
Waar meesha waa in dawlad yeelataa ama iska daba wareeg lagu jiraa.
Wixii Kenya la safan waa la jecel yahay,laakiin wixii dawlada Somaliyeed la safan waa la neceb yahay.
Waar bal aqliba Maryoolayda u fiirso,ileen aduu waxaad tahay nin Barawaani ah oo aqli iyo Diimbaad leedahay e.
Jubbaland way foolanaysaa waxayna ku socotaa sida socota qaybkana ma ogi;
1. In laba madaxwaye, laba baarlamaan iwm samaysmaan sida Cadaado iyo Dhuusamareeb.
2 In Axmad Dhuxulayste xabbadda billaabo deetana Jubbaland oo dhan qaraxdo.
3. Inuu Axmad Madoobe xasuuqo murashaxiinta deetna mugdi gasho Jubbaland iwm
Si kastaba qaskan waxaa wada waa Axmad Geeda Naar oo doonaya in uu indha sarcaad iyo been ku qaato doorasha u yaal aanan jirin villa Kismaayo.
Wuxuu cabsiiyay dhammaan oday dhaqameedyada kaddib markuu mid ama laba ka dilay.
Kismaayo waa xabsi dusha ka furan oo aanan la hadli karin.
Aragtidayda waxaa weeye in Axmad Geeda Naar la dhaafiyo meesha si Jubbaland hore ugu socoto.
Waa sida aad jecesha
Kismaayo hal barlamaan
Iyo hal madaxweyne ayaa
Ka shaqayn dhi ka aad
Kismaayo larabto alaahu
Mini jinaa dhab ilahay
Ka shaqayn dhib ka aad
Kan sida ALI ZUBER, tallow ma cawlyahan miyaa?????.
Maxaa daba dhigay AXMED MADOWBE… AXMED MADOOWBE XAFIDULLAAH, Khayr iyo barwaaqo buu u horseeday JUBBALAND.
SOOMAALI waa xaasideen. Xogaagaas horumarka iyo nabada ee JUBBALAND heshay aa loo diidan yahay.
Bal eega NACASKAAN VILLA SOOMAALIYA ku xaraysan sidee ari la xareeyey, oo looga marin la’yahay JUBBALAND.
FARMAAJO, daciif, daciif dhalay.. helbihiii SADE DAAROOD kuma yaaleen, ama dhow HAWIYE baa haaystaa…
Waa nin dhoohan… waa nin dhoohan oo sixran..
WALAASHIISH CANAB baa noo sheegi jidhay, waano la yaabi jirnay… walee hadaan runtii ogaanay.
Waa runtaa waa in dawlad la helaa. Dawlad hadii la rabo, waa;
1. LA DHAMEESTIRAA DASTUURKA QABYADA
2. WAA IN LAGU DHAQMAA DASTUURKA
3. KHAYRAAKA WAA IN LA QAYBSADAA
4. WIXII MACAANO AH OO MAGACA SOOMAALIYEED LAGU HELO, LA QAYBSADAA.
5. KHAYRAADKA WAA LA QEEXAA SIDEE LOO QAYBSAN LAHAA.
6.DOORASHADA ONE VOTE ONE MAN WAA IN LA GAADHAA.
Waxaa iga yaabisay:
FARMAAJO, maxuu ugu mashquulayaa, maamulgoboleedyada…
Dawlada soo lagama rabbin in ay la dagaalanto ARGAGAXISADA…
Lacagta laaluushka ee lagu bixinaayo, sida XAAF oo US5 million la siiyey, sida SHARIIF SAKIIN oo la siiyey USD3million, maxaa loo siinaa oo lagu maalin gelin waayey dadka baahan, cusbutaalo, tacliin..
WAR BAHALOOOOW, meesha dawladi ma jirto, waa MOORIYAAN soo tafa xeelatay.
Ma Suldaan Ali Zubeer baad leedahay dhib baad la rabtaa Jubbaland?
Iska hadlow ina Igarre.
Waar haddii la naqdiyo ama la odoroso siday wax u socdaan ma Jubbaland baa la dumiyay?
Axmad Geedana waa la naqdin oo weliba la sheegi daanyeerimada uu samaynayo. Bal adba
Hangaadu iyo garaadkaadu jaalle ha koraan. Weligaa nin warlord ah meelna hawgu xidhnaan, hana difaacin.
kkkkkk. Yaa ku yidhi Suldaan Ali Zubeer baa kala jecel Soomaali. Adeer diinta horta baro oo ka daa daanyeerkaa aad leedahay Xafidahu Allah. Waxaan ku leeyahay Axmad madoobe waa nin ka been sheegay diinta oo kutub xoor ah, degaankana waxba ka qaban.
Qabyaaladda ku wadda waa mid ka fog caqliga iyo diinta saxda ah.
Aniga oo ina adeerkiisa ah waxaan ka hadlayaa sida uu u dib ugu dhigay Kismaayo ilaa uu ka noqday dictator aanan doonayn wax horumar ah iska daa sugidda macnaha diinta. Adigana waa iska dhaantaynaysaa.
Nin jeclaygisa iyo xigaalaysiga waa cudur xun oo halkaa dhigay Soomaaliwayn.
Dib u dhaca fikradeed ee ay la socoto dhaqan xumida waa mid dilooday Soomaalida maanta.
Ilaa laga gudbana Soomaalidu meelna gaadhi mayso.
Ugu dambayn ogow in Beesha Calwahan majority ka tahay gobolka Jubba dhexe. Cawlahan miyaa kulahaa….Miskiin.
Nin Jubbaland kala yaqaan ha kuu warramo
10 Sano ka hor markii la dhoobdhoobayay waxan loogu yeedho Jubland sidaa ayaa laysku haystay.
Hal talaabo ah hore looma qaadin.
saa dadkii waxan hogaaminlahaa ayaan meesha joogin.
Dad ay Kenya isticmaalayso ayaa meesha la keenaa.Wax kale oo loo socdaana maba jiro.
Ali zuber anigu waxaan
Kuu fahmay nin gabgab ah
Nabi amaanka badan iska
Dhaaf wixii majority ah
Anigu hada kama shekeynayo
Jubooyinka majority iyo minority
We all know who is the majority
Imtixaan ayeey Jubbaland maraysaa….
Imtixaanku waa inay weli qaan gaartay iyo inkale…
Hadday wada hadlaan, wada tashadaan, isqanciyaan, isu dulqaataan…kadibna doorosho macquul ah oo lagu qanco qabtaan, micnaheedu waxay noqonaysaa, in intii ay dhisnayd Jubbaland aysan curyaan ahayne ay maamul shaqaynaya, hay’adihii maamul dhisaya ay ahayd…taasoo tilmaan u ah maamul horusocod ah oo qaan gaar ah…..
Laakiin hadday dooashada ku fashilmaan, rabshado iyo dagaalo dhacaan, arrimahooda maamul maarayn waayaan, inta la soo dhexgalo laga faa’iidaysto oo la isku diro si maamulka iyo horumarka loo fashiliyo…taas iyana Jubbaland waxay uga dhigmaysaa inuu ahaa maamul jilicsan, fadhiid ah oo aan hay’ado maamul dhisin…waxay ku keenaysaa sumcad xumo iyo tafaraaruq waxaa ka faaidaysanaya cadowga aan horumarkooda iyo sharaftooda jeclayn….marka bal aan eegno in Jubbaland imtixaanka ku foosto iyo inkale, inay qaangaarto iyo inkale….